China Cryolipolysis body slimming Fat Freezing Machine kunye nomsebenzi wezandla ezine ngexesha elinye umzi-mveliso kunye nabavelisi |KEYLASER
1.Izibambo ezine ezinesikrini, zinokusebenza ngexesha elinye
2.Iziphatho ze-silicon ezimbini: usebenzisa isilicon yonyango, ethambileyo ukwenza umthengi azive ekhululekile ngexesha lonyango
3.Iziphatho zesikhenkcisi ezingama-360° ezimbini: 360° ukupholisa, isiphumo esihle sokupholisa
1. 360 ° Icer series has ezintandathu ukhuseleko olusebenzayo ubhaqo oluzenzekelayo, ukubeka ukhuseleko kwindawo yokuqala.
2. Umatshini uxhotyiswe nge-12 ukuhamba kwamanzi / iqondo lokushisa lokubona ixesha langempela ukuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo komatshini.
3. Iqhosha elinye-iqhosha elizenzekelayo lokucoca umsebenzi, kunye nokuzaliswa kwamanzi ngokuzenzekelayo kunye nomsebenzi wokukhupha, olungele ukusetyenziswa kwansuku zonke kunye nokugcinwa.
4. Ngepompo ethule yaseJapan, ingxolo iyancitshiswa ngama-30%, iphucula imvakalelo yokusetyenziswa.
1.Imisebenzi emine kwiziphatho ezine, inokusebenza ngexesha elinye
2.Amandla eVacuum: 100KPa(max)
I-4.Ixesha loNyango: 1-60min
Ujongano 10.4 intshi touch umbala screen
Isicelo Ukunciphisa umzimba
Izibambo Izibambo ezi-4 zisebenza ngexesha elinye
Unyango Lwexesha -10℃-+5℃
Ixesha loNyango 1-60min
Inqanaba lokufunxa 1-6
Ukubeka iliso 8pcs
Ukunikezwa Amandla 220V/110V
Q1.Uthini umahluko phakathi kwe-cryo endala kunye ne-silicone cryo?
Re: Okokuqala, iSilicone cryo ithatha ubushushu bokuqala kwaye emva koko ipholise, iziphumo zonyango zingcono ngakumbi, i-cryo endala ipholisa kuphela.Okwesibini: I-silicone cryo ingasebenzisa ngaphandle kwe-membrane enomkhenkce, i-cryo endala kufuneka isebenzise;Okwesithathu, i-Silicone cryo ibona ngokucacileyo ubunzulu bokufunxa, ukuchasana nomkhenkce, kulunge ngakumbi ulusu.
Q2.Indlela yokusebenzisa umatshini, yintoni ikhosi yonyango?
Re: Incwadi yomsebenzisi yobuchwephesha, ividiyo yokusebenza kunye neprotocol iya kukubonelela, nceda ungenzi'Ungakhathazeki, unyango olu-1-2 njengekhosi, iinyanga ezi-1-2 njengekhefu.
Q3.Mingaphi iminyaka yewaranti oyibonelelayo?
Re: Iinyanga ze-24 (zingabandakanyi umonakalo womntu), ukugcinwa kwexesha lokuphila kunye nenkxaso yobugcisa.
Q4.Ungenza njani ukuba umatshini waphukile ngexesha lokuthunyelwa?
Re: Bonke oomatshini bathunyelwa phantsi kwe-inshurensi, xa kukho nawuphi na umonakalo ngexesha lokuthunyelwa, inkampani yethu iya kukunceda ukuba wenze ibango ngexesha elifanelekileyo!
Q5.Senza njani ngayo ukuba umatshini ufuna ukulungiswa?
Re: Sinecandelo lenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa ukukunceda ukusombulula ingxaki kwi-intanethi kunye nevidiyo, ukuba ingxaki ayikwazi ukulayishwa kwi-intanethi, siya kukuthumelela iindawo zokulungisa, ngaphandle koko uya kufumana amacandelo amatsha kunye neendleko zamahhala.
Ngaphambili: I-laser diode ethe nkqo idibanisa yag laser ipl shr elight rf umatshini wemisebenzi emininzi
Okulandelayo: Ems sculpt Umzimba Contouring izihlunu umzimba owomeleleyo Machine Slimming